Tsy matoky ny Fitsarana intsony ny fianakavian’ireo voampanga amin’ny raharaha Danil RADJAN tao aorian’ny fandravana didy navoakan’ny Fitsarana tampony ny 24 Septambra 2021 teo. Nambaran’izy ireo fa voazimbazimba hatrany ny zon’ny voampanga satria dia efa nandeha teo ny vono mba ahazoana fieken-keloka tany am-piandohan’ny raharaha, ny fanosoram-potaka isan’andro amin’ny haino aman-jery sy ny famoahana vaovao mitanila sy manameloka sahady, fa indrindra ny tsindry atao amin’ny Fitsarana.
Nanaitra ny maro misehatra ao amin’ny tontolon’ny Fitsarana tokoa mantsy ny sori-dalàna maro napetrak’ity raharaha ity. Raha tsiahivina ny toe-draraha, dia nisy famonoana teratany karana iray, Danil RADJAN, ny volana septambra 2020. Raha vaovao sy resabe nanintona no fahitan’ny be sy ny maro ny toe-draharaha dia fandikan-dalàna sesilany no fahitan’ny mpahay lalàna azy, satria hoy izy ireo tsy fanajana ny “présomption d’innocence” ny familiviliana ny saim-bahoaka natao tamin’ny fanamelohana maro samihafa tamin’ny haino aman-jery, sy tambazotra, ary ny fiparitahan’ireo tsiambaratelo marobe, vidéo sy fitanana an-tsoratra, dia tsy fanajana ny tsiambaratelon’ny famotorana (secret de l’instruction).
Saingy na teo aza ireo dia nangina sy tsy nandray fepetra ny Fitsarana, hany ka nampametra-panontaniana amin’ny mety ho fiandaniana. Vokany, rehefa nivoaka ny didy nanafaka ireo voampanga efatra mirahalahy, satria voamarina fa nisy herisetra natao tamin’izy ireo, ary tsy nisy ireo porofo marobe nolazaina fa efa vory hanamelohana azy ireo, dia toa gaga ny be sy ny maro, nefa raha ny toe-draraha sy ny antontan-taratasin’ady no jerena dia toa efa nandrasan’ny mpisolovava azy ireo fotsiny izany raha niantso fitoniana izy ireo nandritra ny valan-dresaka natao tamin’ny mpanao gazety raha vao nanomboka kelikely ny raharaha.
Nanamora ny fandikan-dalàna manaraka izany, satria araka ny fanehoan-kevitra navoakan’ireo mpahay lalàna hatrany dia « détention arbitraire » ny mbola tsy namoahana ireo voampanga tao aorian’ny nanafahan’ny Fitsarana ady heloka bevava azy ireo. Satria ny olona iray dia tsy azo tanana am-ponja raha tsy misy ny « titre de détention » hitazomana azy, ary ny “titre de detention” tsirairay dia tsy maintsy manaraka ny fitsipika apetraky ny lalàna, izay raha tsiahivina dia tsy azo adika fa arahina ara-bakiteny (la loi pénale est d’application stricte, n’est succeptible d’interprétation que si l’interprétation est favorable aux prévenus) ;
Raha ny amin’ity tranga ity dia “Ordonnance de prise de corps à exécution immediate” na OPCI no nitazomana ireo voampanga teny am-ponja. Io didy famonjana io dia manan-kery hatramin’ny andron’ny fitsarana, ary rehefa vita ny fitsarana dia tsy misy antony intsony io didy io, fa na misolo sazy na famoahana avy hatrany ny voampanga.
Ny zavatra nisy anefa dia nanome baiko ny hitazomana ireo voampanga mandra-pahatongan’ny fandravana “cassation” ny minisitra teo aloha. Tsy navoakan’ny Tonia mpampanoa lalàna noho izany ny “ordre d’élargissement”, taratasy mamoaka ny voampanga ; etsy an-daniny ny fonja koa tsy namoaka nefa raha ny fahita andavan’andro dia raha vao tsy misy ny “titre de detention” dia mamoaka tsy miera ny fonja : fahita izany rehefa tapitra ny sazin’ny voafonja, na lany andro ny “mandat de depot” ; Ary raha tokony ho “acte positif” amin’ny alalan’ny famoahana “titre de detention” ny famonjana, dia lasa “omission” tsy fanomezana taratasy fivoahana tamin’ity toe-draraha ity.
Mieritreritra ny fianakavian’ny voampanga fa efa naneho ny fiandaniany tamin’ny fanambarany ny minisitra teo aloha, fa sarisary sisa ny fitsarana ho avy eo fa efa voasoratra mialoha ny didy hany ka very fanahy mbola velona izy ireo.